Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 17
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 17
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 17
RUKA 17:1 Zvino wakati kuvadzidzi vake: hazvingaitiki kuti zvigumbuso zvisavuya. Asi unenhamo iye wazvinovuya naye!
Vanhu tinokanganisa pane zvatinoita uye zvatinotenda. Asi zvinosuwisa kuti tinofunga kuti tiri kunatsa, saka nekudaro hatidi kugadziriswa. Dai taive tisina kuzadzwa neruzivo rwedu uye kuzvikoshesa, tingadai tichitarisisa kuti chii chatinotenda, asi vakawanda vedu hatina nguva yacho. Tinoramba takabatirira pazvinhu zvatakaziva kare. Tinoramba takabatirira pachinhu chekutenda zvatinodzidziswa nevakuru vemakereke edu, kuitira kuti hatizodi nguva yekugara pasi kuzvifungira uye kutsvaga chakanaka nechakaipa. Saka, pane zvimwe zvinhu, tichakanganisa, uye denga ngaritibatsire patinotadza, sezvo isu tinoti zvatinotadza tichiti tiri kunatsa uye kuti hatidi kugadziriswa. Kuzvikudza kunoreva kuti hatidi kubvuma kuti tinotadza, saka tinoramba kubvuma kuti kune munhu kunze kwekereke yedu anogona kutigadzirisa. Kune marudzi emasangano emakereke anosvika 30 000 akasiyana-siyana ese anoti rimwe nerimwe ravo rinogona. Saka maKristu mazhinji ari kunyengerwa.
Rimwe zuva ticharipira kutadza kwedu uye kusaziva kwedu kweMagwaro. Parizvino tinoramba kugadziriswa kubva kumunhu asiri musangano redu ratakasarudza. Vehurumende vanoshanduka kana verimwe bato vakavashoropodza, asi makereke nemaKristu havakwanisi kuita izvozvo. Ndicho chikonzero nei maKristu achidzidza zvishoma kwazvo panozopera gore.
MaKristu haana ruzivo rwemakore gumi mukereke. Vane ruzivo rwegore rimwe rinoramba richidzokororwa kagumi. Takafanana nematatya ari mukadziva kaduku keruzivo. Kana kadziva aka kari kaduku-duku, kanotiita kuti tinzwe kunge tiri matatya makuru.
RUKA 17:2 Zvaiva nani kwaari, kuti guyo risungirirwe pamutsipa wake, awisirwe mugungwa, pakuti agumbuse mumwe wavaduku ava.
Kuwanda kwemakereke akasiyana-siyana kunoreva kuti kutadza kwawandisa mukati memaKristu. Pamusoro pazvose, masangano 30 000 akasiyana anotendawo mune zvakasiyana. Vaparidzi vanosununguka nekuparidza kuti pane chakakanganiswa muBhaibheri. Saka vana venguva yekupedzisira havakwanisi kudzoserwa pakutenda kwevapositora madzibaba ekereke yekutanga nekuti vanodzidziswa kuti mapositora akakanganisa . Mune mamwe mashoko, tinofunga kuti tinoziva zviri nani kukunda mapositora akanyora Testamente Itsva.
Tichiwedzera, tinodzidzisa vana vedu kuti mharidzo yekushanduka kwevanhu vachibva mumhuka ichokwadi, uye kuti takabva pamhuka. Kutuka Mwari kwakadii akatisika nemufananidzo wake. Vesainzi vakatsvaga kwemakore 160 kuti vawane chinhu chisipo pakati pemunhu netsoko. Vanopikisana zvakanyanya pamusoro pazvo, asi vese vanotenderana pachinhu chimwechete: chinhu chisipo hachisati chavapo. Hapana tsananguro yakanaka yesainzi ingavakwe pamusoro pechinhu chisipo. Saka shanduko yevanhu kubva kumhuka manyepo.
Shanduko yevanhu vachibva mumhuka inoti tsoko yakaita munhu kubva mairi. Bhaibheri rinoti munhu akaita”tsoko” kubva maari. Saka munoti ndiyani ari kugona apa.
Tinodzidzisa vana vedu kuti Bhuku raGenesisi ringori “fungidziro” uye harina chokwadi chakazara, edzai kutsanangura kusika muzviitiko zvesainzi “nguva yekusaziva” isingatendi mutsananguro yeBig bang. Asi vanhu vesainzi vakafanana naSteven Weinberg na Allan Guth vakawana mubairo weNobel , vakatanga tsananguro yeBig bang nekuiita huru, parizvino vave kutambira kure nayo. Big bang haina kubvira yaburitsa ravanoti simba rerima (Dark Energy) nechinhu chine huremu chinodya nzvimbo (Dark Matter) pamusoro pazvo vesainzi havana chavanoziva. Izvi zviviri zvinodya 96% yenyika. Saka chidimbu chikuru chenyika hachikwanisi kutsanangurwa nesainzi. Saka vesainzi havana kungwara sezvavanofunga kuti vakaita, sezvo nyanzvi chaidzo dzesainzi hadzikwanisi kuwana zvibodzwa zvinodarika 4% pabvunzo dzekuti chii chiri mune zvese zviri panyika. 4% iri kure kwazvo nezvibodzwa zvekuti munhu anzi akapasa. Chero munhu anoziva 4% pamusoro penyaya inenge achitaurwa anokurudzirwa kuti anyarere zvake.
Rimwe zuva ticharipa mubairo mukuru pamusoro penhema dzekuzvikudza kwedu nesainzi.
I TIMOTIO 6:20 Iwe Timotio chengeta icho chawakapiwa, ufuratire kutaura kusina hanya naMwari nokuramba kunobva pazivo inonzi zivo dziri nhema hadzo.
Panguva yekupedzisira, isu maKristu emazuva ano ndiso vana vemweya vanofanira kudzokera pakutenda Bhaibheri kwemuTestamente Itsva kwakaitwa nemapositora madzibaba akanyora Testamente Itsva. Mbeu inodyarwa, muti wokura nezvikamu zvakasiyana-siyana, asi pakupedzisira unobereka mbeu yakafanana nembeu yekutanga yakadyarwa pakereke yekutanga. Inobva yava nguva yekukohwa. Panodzokera kereke pakutenda kweTestamente Itsva, Jesu anobva azouya.
MaKristu anoshoropodza vanhu vanoda zvavo kutevera Bhaibheri sezvariri ndiwo ari kumisa hurongwa hwaMwari hwakarurama. MaKristu, vanoruramisira kusaziva kwavo nekutaura kuti mibvunzo yeBhaibheri yavazingagone kudaira haina kukosha, ndivo zvakare zvigutswa zvinodonhedza munzira. Vana vaduku vanoda kuziva kwazvo. Tinofanira kubvunza mibvunzo tese uye tichitsvaga mhinduro. Kana kuti hatisi vana vemweya.
RUKA 17:3 Chenjerai; kana hama yako ikatadza, umurayire, kana akatendevuka, umukanganwire.
Rayira muKristu kana achitadza, asi muregerere kana akatendeuka.
Tese tinombotenda nekuita zvakaipa. Saka tese tinoda kuregererwa. Tese tinofanira kudokwairira kutendeuka. Tese tinoda kudzidza, kurasa zvatakadzidza nekudzidza zvinhu zvitsva. Tinoziva zvishoma kwazvo pazvinhu zvatinofungira kuti tinoziva, sezvo tichinyengerwa zviri nyore netsika dzemakereke. Chii chingatiite kuti titende kuti vazivi vekumabvazuva vakapinda muchidyiro asi kuna Mateo chaputa 2 kunoti vakapinda mumba. Havana kuona Rusvava, vakaona Mwana. Tese tinofanira kunamatira meso emweya kuitira kuti tione zvakajeka zvechokwadi chemuBhaibheri.
MATEO 2:11 Vakapinda mumba, vakawana mwana naMaria mai vake; vakawira pasi, vakamunamata; vakasunungura fuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama, nezvinonhuhwira, nemura.
RUKA 17:4 Kunyangwe akutadzira kanomwe nezuva rimwe, akadzokera kwauri kanomwe, achiti ndatendevuka, umukanganwire.
Ruka ari kuedza kutiudza kuti tese tinokanganisa kakawanda zvakadaro tinofanira kuramba tichingotendeuka. Saka musasungirire munhu anokanganisa kakawanda kana akatendeuka. Munguva yedu yekereke yekupedzisira tese takazadzwa nekusaziva nekutadza pane zvatinofungira. Kanomwe pazuva zvinoratidzira pfungwa yechiverengo chechinomwe, zvinoreva kuti kutadza kwese kwenguva nomwe dzemakereke kunogadziriswa panguva yedu yekereke yekupedzisira. Tisu tiri kurarama munguva ine hunyengeri kukunda dzimwe nguva dzose, saka nehumbwende tinotenda kuti sezvo tisingadi chiro, hatidiwo kugadziriswa zvakare.
RUKA 17:5 Zvino vaapostora vakati kunaShe, tiwedzerei kutenda kwedu;
6 Ishe akati; kana maiva nekutenda kwakaita setsanga yeMastarda, maiti kumuvonde uyu: dzurwa, usimwe mugungwa! Uchakuteererai.
Tinoda kutenda. Tinoda kutenda kuzhinji kwazvo. Kutenda kunouya nekunzwa Shoko raMwari. Kutenda kunoita kuti zvisingagoneki zvigoneke. Tinofanira kudzidza kuti Bhaibheri nderechokwadi, tinofanirawo kudzidza kutenda mune zvakanyorwa muBhaibheri. Izvozvo zvega ndizvo nheyo dzekutenda kwedu. Tinofanira kunzwisisa zvakawanda zveBhaibheri kuitira kuti tiite kutenda kuzhinji.
Ruka apa anoburitsa pachena chokwadi chinorwadza kuti takaneta zvakadii kana tichienzaniswa naJesu.
Jesu akati muranda, anoshandira mari, anoita basa rake, asi haatarisiri kuti tenzi wake amukarire.
LUKE 17:7 Ndiyani kwamuri ungava nemuranda unorima, kana unofudza makwai, akati kwaari, achibva kumunda; vuya, ugare pakudya?
8 Handiti ungati kwaari: Ndigadzirire zvokudya, uzvisunge chivuno, undishandire kusvikira ini ndadya, ndikanwa iwe ugozodya nokunwa?
9 Ko ungatenda muranda, zvaaita zvakanga zvarairwa here?
10 Saizvozvo nemi vo, kana maita zvose zvamarairwa, muti: Tiri varanda pasina takaita sezvataifanira kuita.
Iri ndiro vhesi guru muEvhangeri raRuka.
Sevanhu tinofanira kusatarisira kutendwa naMwari kana tichimubatira.
Mwari anoda kugara matiri otungamira kufamba kwedu kwese. Saka zvese zvakanaka zvatinoita, ndiMwari ari matiri ari kuita zvinhu zvakanaka, saka tinofanira kumutenda. Zvakadaro, takafanana nemotokari, iye ndiye mutyairi.
Pawakapedzisira kuburuka motokari yako yakakuendesa parwendo, wakatenda motokari here?
Nehwaro hwaMwari hatina maturo. Titori zvinyangadzo pachinzvimbo chevabatsiri kwaari.
Ndapota rangarirai kuti tiri varanda pasina kwaari.
Saka nekutitarira, Mwari haana chaanowana, saka zvinoreva kuti tiri kutomuderedza pachinzvimbo chekumusimudzira. Tinoita zvakaipa zvakawanda muhushe hwake kukunda zvakanaka zvatinoita.
Ndinovimba kuti izvi zvichagadzirisa kuzvikudza kwega kwega kuri matiri.
Asi munokwanisa kufunga kuti makaitira Mwari zvimwe zvinhu zvakanaka. Zvichida makaita. Asi muBhuku rake makaita zvakaipa zvakawandisa, muchiitira kuzviwanira imi, uye mukuparidzira kukanganisa mukutenda kwenyu. Kana zvese zvasanganiswa, tinoita zvakaipa zvakawanda kukunda zvakanaka. Ndicho chikonzero tiri varanda pasina, ndicho chikonzero nei tichida muporofita kuti atiswatanudze.
Vanhu gumi vaive nemaperembudzi vakauya kuna Jesu akavaporesa. Asi mumwechete chete ndiye akadzoka akati, “Makaita basa”.
Ruka anoratidza kuti vanhu takaberekwa tisingatendi zvakadii. Zvatakaitirwa naMwari, tinongozvitora sezvisina maturo.
Tinonyunyuta zvakanyanya asi hatimbogoni kutenda.
RUKA 17:15 Zvino mumwe wavo wakati achiona kuti ndaporeswa, akadzoka , achikudza Mwari nenzwi guru.
16 Akawira pasi nechiso patsoka dzake akamuvonga: zvino iye wakanga ari muSamaria.
Ruka anoda vaHedeni, anoraira maJuda zvikuru nekusimbisa kutaura kuti munhu mumwechete akadzoka kuzotenda aive asiri muJuda.
RUKA17:17 Ipapo Jesu akapindura akati: Havana kuporeswa vanegumi here? Vapfumbamwe varipiko?
18 Hapana-wakawanikwa wadzokera kuzokudza Mwari, asi uyu mutorwa here?
Ruka akaratidza kuti vanodiwa kwazvo, maJuda, havana kuita zvakanaka. Mutorwa, anosairirwa nemaJuda, ndiye akafadza Jesu.
19 Ipapo akati kwaari: Simuka, uende; kutenda kwako kwakuporesa.
RUKA 17:20 Zvino wakati achibvunzwa nevaFarise, kuti vushe bwaMwari bwunosvika rini, akapindura, akati; Vushe bwaMwari habwuvuyi bwuchivonekwa.
Hakuna zviratidzo zvekunze zvinovonekwa zvinoratidza huvepo hwaMwari. Saka maKristu vanoona hupfumi hwavo hunovonekwa nekararamiro kavo kanodakadza sezviratidzo zvemaropafadzo aMwari vari kuzvinyengera. Vanhu vakapfuma kwazvo pasi pano havasi maKristu.
Kuita kereke yakakurisa zvinoyevedza kutarisa. Asi nekuti zvinovoneka, hachisi chiratidzo chekuti kereke iyoyo iri kugona kana kuti iri muchikamu chehurongwa hwaMwari.
RUKA 17:21 Havangati, tarirai pano! Kana; Uko! Nokuti tarirai, vushe BwaMwari bwuri mukati menyu.
Hushe hwaMwari hahuwoneke. Saka hausi kubudirira munezvematongerwo enyika, kana kuita pfuma zhinji, kana kuwana zvinzvimbo zvekusimudzirana.
Hushe hwaMwari ndipo paanogara mukati memoyo yevanhu otiita kuti tife kuzvivi nezvido zvedu.
Anokwanisa chete kuwedzera pakubata kwake matiri patinozvideredza pakufambisa hupenyu hwedu.
Patinonetera ndipo paanosimba matiri. Hushe hwaMwari ihondo yemukati kuti timupe zvido zvedu kuti azvitsive nezvido zvaMwari. Patinova vanhu pasina iye anova Munhu akazara.
Hushe hwaMwari huripo kuti isu titende uye titevere zvakanyorwa muBhaibheri.
Hamufanirwi kuva muri panzvimbo yakasarudzika panyika. Hushe hahusi kuzoonekwa panzvimbo imwechete yakasarudzika. Hamusi kuzonzi mutamire kune imwe nzvimbo. Munofanira chete kutenda kuBhaibheri. Munofanira kuwana nzvimbo yenyu muShoko raMwari. Musatsvage Mwari kune imwe nzvimbo kunze kwako. Hukama hwako naMwari hunoitika mukati mako. Kufunga kwako kunofanira kushanduka. Munotaura naMwari mupfungwa dzenyu. Mwari Mweya, saka pfungwa dzenyu mweya unofunga uchishandisa masero epfungwa.
LUKE 17:22 Akati kuvadzidzi vake, mazuva achasvika amuchatsvaka kuvona zuva rimwe ramazuva omwanakomana womunhu, asi hamungarivoni.
“Mwanakomana woMunhu” kutaura pamusoro pemuporofita. Muporofita werudzi rwavaHedeni anodiwa kuti adzosere kereke yekupedzisira kudzidziso yekereke yekutanga. Vadzidzi vaisazoona chiitiko havazoone chiitiko ichi sezvo chaizoitika makore anokwana kuita 2 000 aizotevera. Asi vaive vachiteya nheyo dzeTestamente Itsva dzataizodzoserwa kwadziri nemuporofita wenguva yekupedzisira.
LUKE 17:23 Vachati kwamuri; Tarirai uko! Tarirai pano! Regai kuenda kana kuvatevera.
Asi musafarise pamusoro pevatendi vanomhanya mhanya vachiedza kukuitai kuti muvatevere, kana kuti mutevere vanhu.
Mwari haauyi segore rinoshamisa murenje reArizona. Saka hamutofairi kuenda ikoko.
Muporofita wenguva yekupedzisira haangawedzere chinhu kuMagwaro- anouya chete kuzozivisa zvakanyorwa kare.
Saka musaone mashoko aanotaura seakakosha kupinda Magwaro akanyorwa. Anokwanisa chete kukunongedzerai zvakanyorwa muBhaibheri. Saka musatevere munhu. Imi teverai Shoko raanokunongedzerai kwariri. Tendai zvinotaurwa nemunhu kana muchikwanisa kutsigira zaruriro yake nemavhesi emuBhaibheri anotaura pamusoro penyaya yaari kutaura nezvayo.
Pamagumo, nyika ichange yakasanganiswa neintaneti. Pakati pezvakaipa zvese zviri paintaneti, pane masaiti ekuti vanhu vanosangana nechokwadi. Saka vanhu vanokwanisa kudzidza chokwadi kwese kwachiri. Mafoni nemakomputa anokwanisa kuita zvese zvekutakura zvidzidzo zvese zvatinoda kuti tigadzirire kuuya kwaMwari. Kune imwe nzvimbo, kuchave nemasaiti zviitiko zvakaipa zviri mudariro uye zvine mbiri zvisingatsigirwi neMagwaro. Munokwanisa kudzidza zvese zvamunoda zveBhaibheri kubva mudandemutande rakatandira nyika yese reintaneti.
Kune masaiti ane chokwadi chese chichiburitswa pachena.
Kune mamwe masaiti amunogona kutumira mibvunzo yenyu ichipindurwa.
Kune mamwe masaiti arikushambadza zvakaipa.
Semunhu akazvimiririra unokwanisa kuwana zvese zvaungade kuziva paintaneti.
“Mvura” yemagetsi inonaya kubva pamasai -sai ichidzokorora. Imomo munogona kuwana dzidziso dzakadazara dzemuBhaibheri dzinonaya dzinokwanisa kukubatsirai kugadzirira zvichauya kana kuti mvura yekukohwa, panouya Jesu Kristu kuzotora mudzimai wake, anova kereke inotenda kuBhaibheri.
Saka hazvina basa kuti mugobva kune imwe nzvimbo muchienda kune imwe nzvimbo.
Hakuna vanhu kana makereke anoti ndivo varidzi vechokwadi.
Imi, nembozhanhare kana komputa, munokwanisa kuisa chokwadi chakawandisa sezvingaitwe nevamwe vanhu kana masangano. Asi munofanira kutsvaga chokwadi nenzira yakanaka uye yakavimbika Mwari vanokutungamirirai.
RUKA 17:24 Nokuti semheni inopenya, ichibva kunorumwe rutivi pasi pedenga ichivhenekera kusvikira kunorumwe rutivi pasi pedenga, ndizvo zvichaita mwanakomana womunhu vo nezuva rake.
Mheni chiedza chinofamba.
Kaini akaenda kumabvazuva nemweya yemadhimoni (mambo wekumabvazuva) ikabva yagara ikoko. Hondo dzemweya yemadhimoni iyi yava kuyerera ichienda kumadokero kunonyengera vanhu.
GENESISi 4:16 Ipapo Kaini wakabva pamberi paJEHOVA, akandogara panyika yeNodi, kumabvazuva kweEdeni.
ZVAKAZARURWA 16:12 Zvino wechitanhatu wakadurura ndiro yake pamusoro porwizi rukuru runonzi Yufratesi; mvura yarwo ikapwa, kuti nzira dzamadzimambo anobva kumabvazuva dzigadzirwe.
13 Ipapo ndakaona mweya yesvina mitatu yakaita samatafi, ichibva mumuromo weshato nomumuromo wechikara, nomumuromo womuporofita wenhema.
14 Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose, kuvakokera kukurwa pazuva iro raMwari wamasimba ose.
Yufratesi ndirwo rwaive muganhu wenyika yechipikirwa. Kupwa kwakaita rwizi chiratidzo chekuti sekuoma kunoita mvura dzeShoko, ipapo nzira dzemweya yakaipa dzinobva dzazarurwa. Patinorasa Magwaro, Diaborosi anobva atikurira.
Shato ndiye Diyaborosi. Chikara ndiro simba rezvechitendero-nezvematongerwo enyika rekereke yeRoman Catholic. Muporofita wenhema ndiye muporofita wechitendero chenhema chisiri muBhaibheri, Pope. Zvitatu izvi ndizvo zvakaita dzidziso yeTiriniti. Tiriniti ndiyo dzidziso huru iri kuita minana mune zvemweya nhasi uno, kubatana kwemakereke. Hakuna zvimwe zvizhinji zvinotenderana makereke. Kubatana kwemakereke pasi pehutungamiriri hweRoma kunounza maKristu ese ari muzvikwata zvemakereke munguva yeKutambudzika kukuru. MaKristu akaponeswa anosara achipinda munguva yekutambudzika kukuru achafa ese. Pakupera kwenguva yeKutambudzika kukuru, apo maKristu akaponeswa ese aparadzwa, Kristu achadzoka kuhondo yeAmagedhoni.
Kubva pahurongwa hwaMwari, munyika dzeMiddle East chiedza cheShoko raMwari chakaratidzwa naJesu nemapositora mukati menguva yekereke yekutanga.
Chiedza ichi chizhinji chakarasika muNguva yeRima.
Kumashure kweNguva yeRima, Martin Luther kuGerman akadzosa chiedza cheruponeso nenyasha kupfurikidza kutenda. Uku ndiko kunonzi kururamisira. Ipapo chiedza cheEvhangeri chakaenderera mberi kumadokero uko John Wesley akaparura maKristu aive nezaruriro yehutsvene uye kuparidzira. Uku kunonzi kururamisira. Ipapo chiedza cheEvhangeri chakabva charamba chichienda kumadokero kuAmerica uko rumutsiridzo rwePentecosti rwerubapatidzo rweMweya Mutsvene rwakaparura mabasa ezvipo zvaMwari zvinoshamisa. Ipapo kuAmerica, nekuti ndiko kwakaperera madokero kwatinokwanisa kusvika, kufamba kweMweya Mutsvene uku kunofanira kuparurwa muhushumiri hwedzidziso dzinozivisa zvakavanzika zvaMwari, anova Shoko. Chiedza cheMagwaro anoziviswa aya chinobva changofanana nechiedza chenguva yekereke yekutanga. “Mwanakomana weMunhu” zvinoreva Kristu achishanda chakavanzika chechiporofita chinotungamirira kereke yenguva yekupedzisira kudzokera pakutenda kwekereke yekutanga.
Zvakakosha kuti tidzidze kunamata Mwari zvese muMweya nemuchokwadi cheBhaibheri.
RUKA 17:25 Asi unofanira kumbotambudzika zvizhinji, nokurashwa norudzi urwu.
Asi Chokwadi hachisi kuzozadziswa pasina marwadzo nekurambwa. MaJuda akaramba Chokwadi akauraya Jesu. Hapana akamiririra Jesu paCalvari, kwaive Kuuya kwake kwekutanga.
Saka hazvizoshamisi kuti kereke yenguva yekupedzisira icharamba Chokwadi chemuBhaibheri chinoziviswa, nekuti nekutenda zviri muBhaibheri chete ndipo patinokwanisa kuzodzokera pakutenda kwekereke yekutanga.
RUKA 17:26 Sezvazvakanga zvakaita namazuva aNoa, ndizvo zvazvichaita vo namazuva oMwanakomana womunhu.
27 Vaidya nokunwa, nokuwana, nokuwaniswa, kusvikira zuva rakapinda Noa muareka, mvura zhinji ikasvika, ikaparadza vose.
Hapana akamiririra kuparidza kwaNoa. Nekudaro vanhu vose vakamuramba. Vanhu vasere chete ndivo vakapinda muareka vakaponeswa. Ichi chiratidzo chinotyisa kwazvo pakereke yenguva yekupedzisira. Vashoma ndivo vachakunda.
Saka, zvichibva pakufananidza nemazuva aNoa, Chiporofita chenguva yekupedzisira kana kuti “hushumiri hwemwanakomana wemunhu” huchapera pasina kana vazhinji vanotenda zvinorehwa neBhaibheri. Dzidziso dzakaitwa nevanhu dzinobva pamazwi akataurwa nevanhu uye tsika dzemakereke ndizvo zvichaita mbiri. Ndiyani chaiye achatenda zvakanyorwa muBhaibheri? Vashoma-shoma.
Zvino kutambudzika kukuru kuchasvika sedutu remvura. Panguva iyi uchange uri moto, kwete mvura. Mabhomba enyukiriya ari kutogadzirwa mamwe akamirira.
RUKA 17:28 Sezvazvakanga zvakaita vo namazuva aroti, vaidya nokunwa, nokutenga nokutengesa, nokusima nokuvaka.
29 Asi nomusi wakabuda Roti muSodoma, moto nesurferi zvakanaya, zvichibva kudenga, zvikavaparadza vose.
Zvakare, muenzaniso neimwe nguva ine vashoma vakakunda. Vanhu vatatu chete ndivo vakabuda muSodoma. Roti nevana vake vaviri. Saka hakuna akakunda moto unomiririra Kutambudzika kukuru kuri kuuya pakupedzisira kwenguva yekereke yekupedzisira.
Moto wakabva kumusoro kudenga. Munguva yeKutambudzika inouya, ndege dzichadonhedza mabhomba enyukiriya kubva mudenga. Mamisiri achanayisa mabhomba enyukiriya kubva kudenga. Anoputika mazana emamita mudenga kuitira kuti kana achisvika pasi aparadze nzvimbo dzakakura. Kuchange kuchinaya moto. MaKristu akaponeswa ese achapotsana nekukwira kudenga kwekereke kunosangana naShe kumakore, vachasara munguva yeKutambudzika kukuru, vachafa.
ZVAKAZARURWA 13:15 Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure chiraire kuti vose vasinganamate mufananidzo wechikara vavurawe.
MaKristu akaponeswa, vasikana vakarara, vacharamba kunamata mufananidzo wechikara. Ipapo vachabva vaurayiwa.
Ichi ndicho chikara chechipiri chinotaurwa nezvacho muchaputa 13. Chikara chekutanga (kana simba) ikereke yakapararira nepasi rese Roman Catholic. “Iye” ari pavhesi riri pamusoro ari kumiririra simba rezvematongerwo enyika rekuAmerica rakasimuka musenturi yekupedzisira (nguva yekereke yeRaodikia) kuti itonge nyika munezvehondo nezvemari. Simba rechikara cheAmerica isimba rayo guru mumasimba ezvemari. Vanhu vapfumbamwe pagumi vanoshanda mabasa echiKristu zvenguva dzese vari kuAmerica. Mari yekuAmerima inobatsira budiriro yemakereke pasi rese. Mari iyi ndiyo ropa rehupenyu remasangano ezvechitendero inobhadhara vanhu vanoita kuti bato iri rirambe richirarama.
Munguva yeKutambudzika kukuru chikara chichakurira nyika ikereke yeRoman Catholic nemasangano ayo. Mufananidzo wechikara ndiwo makereke akabuda mairi nemasangano anotevedzera kuita kwesangano reRoma nekuvaka masangano pasi rese anozvisanganisa munezvematongerwo enyika nemari zhinji. Rangarirai Judasi akasarudza mari.
Makereke ari kukanganisa zvakanyanya pavanoti, kana tikatendeuka tikagamuchira Jesu seMuponesi wedu, tinozopunyuka nguva yeKutambudzika kukuru. Kwete. Kutendeuka kunotiponesa kubva kuHadesi. Kwaive nevasikana vakangwara nevasikana vakarara vose vaive vakadzi vakachena vanotaridza vatendi vekereke vakaponeswa. Asi vasikana vakangwara chete ndivo vakasangana nechikomba, Jesu. Vasikana vaive vakarara vakaponeswa kubva kuHadesi, asi vachafa munguva yeKutambudzika kukuru. Imi makangwara zvakadii?
Zvakawanda sei zvamunotenda zvamunokwanisa kutsigira nemavhesi emuBhaibheri?
MaKristu mashoma anokwanisa kutsigira zvaanotenda neBhaibheri. Mune zvakawanda zviri muBhaibheri asi maKristu haakwanisi kuzvitsanangura.
Adamu naEva vakaita chivi chimwechete. Mwari akati kunaAdamu “Nekuti waita izvi, mutongo wako ndeuyu ...”.
Asi kuna Eva haana kutsanangura. Haana kuti “Nekuti”. Nekuda kwei asina?
Vakaita chivi chakafanana asi vakarangwa zvakasiyana. Nei?
Mwari akaita miti yese pazuva rechitatu, akati zvese zvakanaka. Saka kwaive nemuti wakaipa here mumunda weEdeni?
Mateo akaronda dzinza reropa raJesu kubva kuna Davidi kusvika kuna Josefa. Ruka akaita dzinza rakafanana asi akashandisa mazita akasiyana uye akawedzera mamwe mazera gumi nematatu pakati paDavidi naJosefa-Nei?
Makereke manomwe akataurwa muBhuku raZvakazarurwa nemazita emaguta awo. Matanhatu akataurwa nemazita awo emazuva ose. Asi guta rePergamumu rakadaidzwa kuti Pergamo, zita raro rechiGiriki. Nekuda kwei kereke imwechete iyi yakataurwa nezvayo vachishandisa chiGiriki pazita rayo, asi mamwe makereke matanhatu asina?
MaKristu anhasi tigere nezvikamu zvikuru zvisina chinhu paruzivo rwedu rweMagwaro. Tinoda muporofita wenguva yekupedzisira kuti atiswatudze.
Tinofunga kuti tinoziva zvizhinji, uye kuti takazadzwa neruzivo rweBhaibheri zvekuti tinofunga kuti hatidi rubatsiro kubva kunze.
Asi kuzvikudza kunotizadzawo nekusaziva.
RUKA 17:30 Ndizvo zvazvichaita vo nezuva iro, Mwanakomana womunhu raachaonekwa naro.
Kana muporofita wenguva yekereke yekupedzisira akazivisa zvakavanzika zvakavanzwa muBhaibheri, vashoma kwazvo vachadzosera kudzidzisa kwake kuBhaibheri, vokwanisa kuratidza kuti zvaanoparidza zvigone kuratidzwa nekuyananisa mavhesi eBhaibheri pamwechete. Vashoma vachagona kuita izvi ndivo vachapunyuka kubva kunguva yeKutambudzika kukuru iri kuuya kuzopisa kutadza nekuipa kwenguva yedu.
Muvengi mukuru wechiKristu “chichechi-chechi” chemasangano. Vanhu vanoti, “ini ndiri wekereke yangu. Ndinotenda zvinotaurwa nekereke yangu. Saka kereke painotaura zvakasiyana nezvinotaurwa neBhaibheri, zvinoitwa nemakereke ese, ipapo ndinotenda zvinotaurwa nekereke yangu ndosiya zvinotaurwa neBhaibheri”. Ndiko kuita “kwechichechi-chechi”. Kupikisa kwakadzama kunobvumirana nekutadza kuri mukekeke. Hatidi kubvuma kuti dambudziko rakadai ririko. Tinonamirira pakutadza kwedu, uye zvinotyisa kwazvo kuti hatizivi kuti tinozvikudza.
RUKA 17:31 Nezuva iro uri pamusoro peimba, nhumbi dzake dziri mumba, ngaarege kuburuka kundodzitora, saizvozvo vo, uri kumunda ngarege kudzokera kune zvirishure.
Panguva yekereke yekupedzisira Jesu akamira kunze kwemusuwo wekereke achigogodza. Ari kukumbira kuti munhu mumwe nemumwe azvipire kumuzarurira apinde, kwete kereke yese. Ruka arikutaurawo pamusoro peuyo munhu anopunyuka kuriva ranhasi “chichechi-chechi”. Ari pamusoro pemba anokwanisa kuona zviri kure kwazvo kukunda vari mukereke. Kana munhu ari kumunda, chiratidzo chemabasa eEvhangeri. Kana akaona kutadza kuri mumasangano, munhu iyeye anofanira kupunyuka kutsika nedzidziso dzinoitwa nevanhu dzemukereke.
Isu, mumwe nemumwe wedu, tinofanira kubva kumafungiro echinyakare uye dzidziso dzekereke yedu. Tinigona kusarudza kuramba tichienda kukereke, asi tosiya kuita kwese kwedzidziso dzemafungiro evanhu. Tozvisiya, togarira kure netsika dzemasangano, mafungiro nekubata kwayo. Munokwanisa kubva matadza kuwirirana nekutonga kwevafundisi mumakereke. Kana mukangokwanisa kuona kuti Bhaibheri rega ndiro rine chokwadi, ipapo hamuzooni zvakataurwa nevanhu sezvinoenzana neMagwaro. Munobva mapera rudo rwekutevera munhu, nekuti nenzira iyoyo munoguma musisakwanisi kutsigira kutenda kenyu neBhaibheri. Hamuzokwanisi zvakare kushoropodza aninani anokukurudzirai kuti mutende kune zvakanyorwa muBhaibheri zvega.
Kubva mukereke imwechete inotongwa namufundisi kuenda kune imwe kereke inotungamirwa namufundisi hakugadzirisi matambudziko enyu, sezvo munosiya svinga rimwechete rekukanganisa muchiritsiva nerimwe svinga rekukanganisa. Mamiriro nemarongerwo emakereke edu haateveri maitirwo aiitwa zvinhu mukereke yeTestamente Itsva zvakanaka.
Izwi rekuti “pasita” mufudzi rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva, saka hushumiri uhwu hahuna kubvira hwatonga mumakereke ekutanga. Hakuna Magwaro akataura kuti mufudzi (shepard) ndiye mufundisi. Vafundisi vanozviti ndivo vafudzi vemakwai (vanhu vari mumakereke). Izvi zvinoita kuti mufundisi ave chisikwa chepamusoro-soro. Munhu ari pamusoro pezvimwe zvisikwa zvese. Asi kusimudzira chero munhu anorarama ndiko kuita tsika dzavanikoraiti, kupamba sangano kana kuti ungano. Mwari anovenga izvi.
RUKA 17:32 Rangarirai mukadzi waRoti.
Akatendevuka kutarisa zvaaive nazvo. Haana kusiya zvose nemoyo wake wese sezvo aitya kutangidza kuronga hupenyu hutsva. Aida kuva nezvaaive nazvo kare.
Tinoda hutungamiri hwevanhu nekutongwa kwataiitwa kare. Saka kana tikaedza kupunyuka kubva kuzvitendero zvisimo muBhaibheri tinofanira kubva tararama nezvinotaurwa neBhaibheri, kunyangwe vakuru vekereke vakaparidza kutadza, nekuti tikasadaro tinofa pamweya sezvakaita mukadzi waRoti. Mukadzi anomiririra kereke. Akaedza kupunyuka kubva pakutadza, asi akabva atendeukira kutarisa kutadza kwaaive asiya asi aive achiri kukuda.
RUKA 17:33 Aninani unotsvaka kungwarira vupenyu bwake ucharashikirwa nabwo, vuye aninani unorashikirwa nabwo, uchabwuraramisa.
Munokwanisa kuwadzana mukereke, ine miyero yechokwadi inokwanisa kukubatsirai, asi hamuzowani chokwadi chakazara kubva kune chero sangano rekereke. Munofanira kuzvitsvagira chokwadi chakazara pachenyu, kunze kwekereke yenyu. Kuedza kubvumirana nekutadza kwevaparidzi nekereke kunokuitai kuti mutadze kuratidza kutenda kwenyu kubva muBhaibheri pekutanga, kunokuitai kuti munzwe makachengetedzeka mumapoka matsvene ekubhabhadzirana, asi makananga kunguva yeKutambudzika kukuru.
Zvirinani muvarege vakurangei nekuvapikisa. “Vakarashwa” vekereke ndivo vachakunda pakupedzisira.
Jesu ave kuburitsa pachena kuti vashoma kwazvo vachakunda kuti vakwire kudenga vasangane naye kumakore panotorwa kereke, zvichaitika pane chimwe chinhano nenguva. Anotaura nezvenguva nhatu dzakasiyana pazuva: kurara, kugadzira chekudya, uye kushanda mumunda.
Asi pane chero mukana, nguva nhatu dzakasiyana dzezuva dzinoreva nzvimbo nhatu dzakasiyana panyika. Zvakare, zvichibva pamufananidzo uyu, vanhu mumwe nemumwe vanoenda, kwete sangano. Nzvimbo nhatu dzakasiyana panyika, uye munhu mumwechete ndiye achatorwa panzvimbo imwechete. Izvi hazviite kunge kune vanhu vakawanda vachakunda. Tinofanira kungwarira sezvo vanhu vakawanda vachasara.
RUKA 17:34 Ndinoti kwamuri: Vusiku ubwo varume vaviri vachava panhovo imwe, mumwe uchatorwa, mumwe uchasiiwa.
35 Vakadzi vaviri vachakuya pamwechete, mumwe uchatorwa, mumwe uchasiiwa.
36 Vaviri vachava kumunda, mumwe uchatorwa, mumwe uchasiiwa.
37 Ipapo vakapindura vakati kwaari: Ipiko Ishe? Akati kwavari;apo panomutumbu, ndipo panovunganira vo magora.
Muviri waShe ndiyo kereke yake yechokwadi, inoitwa nemoyo yevanhurume nevanhukadzi vanotenda kuMagwaro akaziviswa, ndiko kudya kwedu kweMweya. Magora anoona zvakadzama uye meso awo anokudza zvinhu. Kristu ndiro Shoko. Ndiye Chingwa chevupenyu. Kereke yechokwadi, muviri waShe, unorarama nekudya dzidziso dzinomiririrwa nechingwa kana nenyama yemuviri waShe, Bhaibheri. Saka kereke yechokwadi inofanira kuva kereke inotenda kuBhaibheri.
Saka tinofanira kuva tiri kupi kuti titorwewo tivanzwe kubva pakutsamwa kunovuya? MuShoko raMwari.
Kutenda kuGwaro rega rega uye kugona kuratidza zvatinotenda kubva mumavhesi eMagwaro.
JOHANE 6:51 Ndini chingwa chipenyu, chakaburuka kudenga, kana munhu achidya chingwa ichi, uchararama nokusingaperi, chingwa chandichapa inyama yangu, bwuve vupenyu bwenyika.
I VAKORINTE 11:23 Nokuti ini ndakagamuchira kunaShe icho chandakakupai vo, kuti Ishe Jesu nevusiku bwaakapandukirwa, wakatora chingwa.
24 Akati avonga, akachimedura, akati: Ichi ndiwo muviri wangu, unomedurirwa imi; itai izvi muchindirangarira.
Makondo emweya ane muono wakadzama muShoko raMwari. Haadi kufukidza kusaziva kwavo nekurega chero mubvunzo kana ndima yemuBhaibheri seisina kukosha. Vanoona tsananguro muMagwaro isingakwanisi kutsanangurwa nevasikana vakarara. Marambi avo anopedza mafuta, oburitsa chiedza chinosvibisa mavhesi emuBhaibheri. Rambi risina mafuta harina chiedza charinopa, saka nekudaro chirevo chemavhesi emuBhaibheri hachingaonekwe. Saka vakuru vemakereke vasingagoni kupindura mibvunzo mizhinji yemuBhaibheri havana chiedza pamarambi avo. Saka havakwanisi kutungamirira vasikana vakangwara kuti vasvike paKuuya kwaShe kweChipiri, asi vanogona kungoita kuti vasikana vakarara varambe vakarara.
Makondo ane miromo yakatesva, kuti amedure nyama yeShoko raMwari muzvimedu zvinodyika (zvinonzwisisika).
Makondo anobhururukirawo mudenga denga, zvinomiririra kukwira kudenga kwekereke mukubwaira kweziso.